Ọ bụrụ na ị nụbeghị Ọchịchọ, ị ga .. ma ọ bụ ị ga-eji ya n'oge na-adịghị anya! Ugbua ruru ndị ọrụ 15,000, Schedulicity na-enye azụmahịa ọ bụla na-esetịpụ nhọpụta iji tinye ntanetị n'ịntanetị, facebook na ekwentị nhazi oge onwe ka azụmahịa ha. Usoro a dị oke ọnụ… $ 19 kwa ọnwa maka otu onye ọrụ ma ọ bụ $ 34 kwa ọnwa maka ọtụtụ ndị ọrụ. Lọ ọrụ ahụ malitere otu afọ na ọkara gara aga ma nwee atụmatụ siri ike ma zuru oke nke na-elekwasị anya na azụmaahịa obere na ọkara.
Schedulicity achọghị ihe ọ bụla arụnyere na ngwanrọ na ahịa na saịtị, dị na di na nwunye edemede na mkpado na-eweta interface… ya mere, ha nwere ike iwekota na gị ugbu a na ebe nrụọrụ weebụ na a okwu nke nkeji. Ma, ha nwere Mmekọrịta Facebook ka ndị na-eso ụzọ gị wee nwee ike pịa usoro ihe omume gị ma mee ọhụhụ ozugbo site na Facebook:
Schedulicity abụghị naanị usoro nhazi oge, ọ na - enyere gị aka ịhọpụta nhọpụta emepere emepe dị ka a ga - asị na ọ bụ ngwakọ. A na-enye ụlọ ọrụ azụmaahịa iji nyere ha aka mejupụta oge ha, na-eji atụmatụ mmapụta: